ကျော်​နဲ့ ​ကြောင်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ​ကျော်​နဲ့ ​ကြောင်​
Posted by ムラカミ on Jan 6, 2015 in Think Tank | 11 comments
တကယ်​​တော့ ကျ​နော်​က ​ကြောင်​နဲ့ပါတ်​သတ်​ရင်​ သမိုင်းဆိုးရှိသူပါ
ငယ်​တုန်းက ဘိတ်​မှာ ​ကြောင်​​ပေါက်​စတ​ကောင်​ကို ​သေ​အောင်​ မစဖူးတယ်​
ငတိမကဗျာ အိပ်​ယာ​ပေါ်ရွှံထဲသွားကစားပီးတက်​​ခွေ​နေတာရယ်​ အဲ ရိုက်​ချလိုက်​မိ​တော့ မီးဖိုထဲ ဟင်းအိုးနှိုက်​​နေတယ်​​လေ
အပြင်​က ပြန်​လာကာစထမင်းဆာ​နေတဲ့ကျ​နော်​နဲ့တိုး​တော့ ထပ်​နဗန်​ကျင်းလိုက်​တာ အိမ်​​အောက်​​ပြေးဆင်းပါ​လေ​ရော
အိမ်​​အောက်​​ရောက်​​တော့ အ​ဖေ့ အမဲလိုက်​​ခွေးနှစ်​​ကောင်​ လိုက်​လို့​ပြေးရင်းလွှားရင်း အ​မောဆို့သလား
တကယ်​က အဲ့​ခွေးညီအစ်​ကို​တွေက ​ခွေး​ပေါကြီး​တွေ သူတို့က ​ရွှေဝါ​ရောင်​​ကြောင်​​လေးမို့ ချစ်​လို့ စချင်​တာ ကိုက်​တတ်​တာမဟုတ်​ ​သေသ်ွးေ​ရော ဘယ်​ဟာမှမကိုက်​ဖူးတဲ့ အမဲလိုက်​​ခွေးဆု​ပေးရင်​ သင်းတို့ ညီအစ်​ကိုရမယ်​ထင့်​
ဆာရင်​လာ ပွတ်​သီးပွတ်​သပ်​လုပ်​တယ်​ အဆာဝရင်​ ဖာသိဖာသာ​နေတယ်​ အဆိုးဆုံးက ​ချေးပါပက်​စက်​တာပဲ
အဲ့တုန်းက ​ကျော်​အသက်​ ၁၂နှစ်​ပဲရှိ​သေးတာ အိမ်​မှာ လုပ်​မယ့်​လူ​တွေရှိ​ပေမယ့်​ ​ကျော့်​တာဝန်​က ​ကြောင်​​ချေးရှာတာဝန်​​လေ
ဒင်းက တည်​တဲ့​နေရာမပါသလို ကုတင်​နဲ့​သေတ္တာကြားလို လူလက်​လှမ်းမီဖို့ခက်​တဲ့​နေရာ ပါတတ်​တဲ့​သောက်​ကျင့်​​ကြောင့်​​ပေါ့
အနံ့ရတယ်​မ​တွေ့ဘူးဆို​တော့ လူကြီး​တွေက ​ကျော့်​ကို​ကော
​ကျော်​ကဒင်းကို ​မေတ္တာပို့ နဲ့ဆိုပါ​တော့
တရက်​​တော့ ထပ်​ခိုးမှာတက်​ကြက်​သ​ယေယုတ်​ထားလို့ ​ဆောင့်​ကန်​မိတယ်​ မ​သေယုံတမယ်​ပါပဲ
အာ့​ကြောင့်​ကျ​နော်​​ကြောင်​မ​မွေးဘဲ ​ခွေး​တော့​မွေးဖြစ်​လာခဲ့တာ နှစ်​ ၂၀နီးပီ ​နောက်​ပိုင်းနှစ်​​တွေ​တော့ ငါး​ပေါ့​လေ
အဲ့လိုသမိုင်းရှိဖူးလို့ ​ကြောင်​ဆိုလက်​​ရှောင်​​နေတဲ့ကျ​နော်​ ပြီးခဲ့တဲ့လက လက်​ခံရမယ့်​တခုဖြစ်​လာခဲ့တယ်​
ဘယ်​အိမ်​ကမှန်းမသိတဲ့ ​ကြောင်​မဒန်းမ​လေး အိမ်​​ရောက်​လာတယ်​
ပုံမှန်​​အေး​အေး​နေတတ်​​ပေမယ့်​ ဆာလာရင်​ လက်​​ချောင်းမှာ မနာ​အောင်​ကိုက်​ပြီးအစာ​တောင်းတတ်​တယ်​
ပိုထူးဆန်းတာက ပါစရာရှိရင်​ အိမ်​သာထဲသွားပါတာပါပဲ
ဘိုထိုင်​အိမ်​သာကမုတ်​ကို မထိုင်​တတ်​လို့ ​ဘေးဘက်​မှာ ပါချထား​ပေမယ့်​ အိမ်​က​ကောင်​မ​လေးလည်း မညိုညင်​ဘူး​ပေါ့ဗျာ လိမ္မာတာ​ပြောတယ်​
ပို​ကောင်းတာတခုက အိမ်​မှာ အ​ပေါ်ထပ်ကြမ်းခင်းနဲ့ ​အောက်​ထပ်​ထပ်​ခိုးကြားက စ​ပေ့စ့်​မှာ ကြွက်​​သောင်းကျန်း​နေတာ သူရှိကတည်းက ပ​ပျောက်​သွားတာ​ရယ်​​ပေါ့
အနက်​နဲ့​ရွှေ​ရောင်​စပ်​ကြား ​ကြောင်​မဒမ်း​လေးကို ဘယ်​လိုထိန်းရမလဲဆိုတာ ရွာ့​ကြောင်​ချစ်​သူ​တွေဆီကြုံရင်​​မေးပါအုံးမယ်​ခင်​ဗျ
ခုရက်​ပိုင်း​တော့ သွား​လေရာလိုက်​​နေလို့ နည်းနည်းစိတ်​ပူမိ​ကြောင်း
အဲ့လိုပါဗျာ ၂၀၁၅က အူ​ကြောင်​​ကြောင်​နဲ့ စတဲ့နှစ်​ပါ
အူးကြောင်ဂျီးကို မေးကျိပါလား အူးလေး..ကြောင်မဒန်းမလေးဆိုတော့လေ…အဟီး စတာနော်
မီးမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးလည်း ဆာရင် အဲလိုပဲ မနာအောင်ကိုက်ပေမယ့် သူတို့သွားနဲ့ကိုက်ရင် ယားလို့ ကန်ကန်ထုတ်ပလိုက်တာပဲ…ကန်ထုတ်ပလိုက်လဲ အစာမစားရမချင်း လာလာကိုက်နေတာ…သူက ကိုက်လိုက် ကိုယ်က ကန်ထုတ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ကိုယ်ပဲ အရှုံးပေးပီး အစာကျွေးမှ ငြိမ်သွားတော့တယ်..ချစ်ဖို့တော့ အားဂျီးကောင်းတယ်…
ခပ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ စတယ် ဆိုပါစို့… အူကြောင်ကြောင်ဆို ခွေးပါ ပါမှ ဖြစ်မှာလေ…
အူ= ခွေး လေ…
.ကြောင်တွေ ခွေးတွေက အမိုးနီးယား အနံ့ ရတဲ့နေရာမှာ အပေါ့အလေးစွန့်ကြတယ် ကြားဖူးတာပဲ။ ဂျာမဏီမှာ ကြောင်တို့ခွေးတို့အတွက် လမ်းဘေးမှာ အိမ်သာလုပ်ပေးထားတယ်။ လှလှလေး။ ခွေးတွေ ကြောင်တွေက လမ်းသွားရင် အဲဒီမှာပဲ စွန့်ကြသတဲ့။ အမိုးနီးယားအနံ့လုပ်ပေးထားသလား မသိဘူး။ ဂက်စ်နာမည် သိပ်မသေချာဘူး။ အမိုးနီးယားလား ဘာလား မသိဘူး။ အဲဒါလေး ဖြန်းပေးထားရင် အဲဒီမှာပဲ သွားတယ်တဲ့။
canineconcepts.co.uk › Blog
The pheromone treated Pee Post from Simply Solution can also help in … cleaner with ammonia or bleach, as it will smell similar to the ammonia in urine and the …
.၂၀၁၅တော့မသိဘု…၂၀၁၄အဆုံးသတ်ကတော့ အူ​ကြောင်​​ကြောင်​နဲ့ ပဲ ပီးသွားလေရဲ့
ဒါမယ့်..ကြောင်ကလေး ဘဝကတော့ မတွေးရဲစရာ…
ကျုပ် မတော့ ကြောင် လေး နှစ်ကောင် အထီး အစ်မ မွေးမိပါတယ်။
အထီးလေး က ရွှေဝါရောင် ဝတုတ် လေးမို့ ကိုယ့် အချစ်တော်ပေါ့။
နောက်တော့ ဒင်းက ကြောင်စုံး ဖြစ်ပြီး သူ့ညီမ ကြောင်မလေး မွေးတဲ့ ကလေး တွေ ကို ကိုက်ပါလေရော။
အဲဒီထဲ က ဒင်း ကို သေခန်းဖြတ်လိုက်တာဘဲ။
နောက်တော့ အဝါ အမဲ အဖြူ စပ် ကြောင်မလေး။ တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ လှလှလေး။
စပ်စုမလေး လို့ ခေါ်တာ။
တမနက် မှာ ပျောတ်သွားရော။ သူများခိုး သွားတာ ထင်ရဲ့။
အခုတော့ သက်ရှိ တွေ သံယောဇဉ်ဖြတ်ပြီး တစ်နေ့ ကို ကြောင်ပုံ တစ်ပုံ ရှိတဲ့ 365 Cat ပြက္ခဒိန် ဘဲ ထားတော့တယ်။
အကြံပု ရရင် သားကြောဖြတ်ပေးထားလိုက်။ lol:-)))
ဘာ ဦးကြောင်ကြီးကို ချစ်တယ်ဟုတ်လား…
တော်ပြီ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး လာလုပ်တာ မလုပ်တော့ဘူး ဒါဗြဲ…
ဘာကြောဒယ်… ဖားနဲ့ကြောင် ချစ်နေဂျ ဘီ….
ကြောင်နဲ့ချီးအကြောင်း ဗဟုနဲ့သုတ ရလိုက်တယ်။
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ၂၀၁၅ အတွက် အတိတ်ကောက်ရရင်….
ငြိ်မ်းချမ်းရေးရမယ့် နှစ် လို့…..